Looking for Love? Manspreading Could Be The Isihluthulelo Sokuphumelela - Izindaba Rule
Looking for Love? Manspreading Could Be The Isihluthulelo Sokuphumelela
Ukusebenzisa amavidiyo kanye lokusebenza Tinder-style, abacwaningi batholé ukuthi abantu ngubani owelulela intambo bazenze bakhathale isikhundla sikadokotela sasiya ikhange nakakhulu ozakwethu engahle
Lesi sihloko osesikhundleni “Looking for love? Manspreading kungaba isihluthulelo sempumelelo, ucwaningo lusikisela” lalotshwa Ian Isampula Science umhleli, The Guardian ngoMsombuluko ngomhla ka-28 March 2016 19.00 UTC
Iyakhohlwa ingxoxo elikhazimulayo, kamnandi ihlanzekile futhi sikhumbula igama lomuntu. In the world of dating zanamuhla, imfihlo yempumelelo iwukuthi ukuthatha isikhala.
Ichopho engavamile sokuthola uthando, noma okungenani lover, kuvela US abacwaningi ababesebenzisa speed ukuphola amavidiyo kanye Tinder-style lokusebenza ukukhombisa ukuthi abantu bathole amaphuzu njengoba ikhange nakakhulu lapho esiluliwe bazenze bakhathale.
Abantu ababeka enwetshiwe torsos zabo, kwaphoqa out imilenze yabo futhi basakaze izingalo ububanzi yabo yavuzwa njengoba kungabantu abangaphezulu baqale ukuthandana nothile kunabanye, Cishe ngoba postures wayesikisela ukuvuleleka kanye emakomidini, abacwaningi abathi.
Ngokungqubuzanayo, labo owayesekhokhoba ngokwabo up, wawela ezingalweni zabo nasemilenzeni, kwabahambela ekhanya e amabhidi zabo ukuze lizuze abalingani ezingase zivele.
Okutholakele bangasiza abafundisi inqwaba singletons ngubani, esikhathini Tinder kanye inthanethi ukuphola sites, babe kuphela nedlanzana izithombe kanye imizuzwana embalwa ukuze adlulisele umvuzo omkhulu ubuhlobo nabo wayeyoba amelela.
Embikweni onyatheliswe kuyi- Ekuqhubeni National Academy of Sciences, Tanya Vacharkulksemsuk at the University of California, Berkeley, uchaza indlela yakhe belisebentisa video amavidyo kusuka umcimbi speed ukuphola ukuze abonise indlela kokubili amadoda nabesifazane abakhetha more postures "Lubanzi" wayesebenza nabathile more ucele usuku zokulandelisa.
Yena walandelisa ukulinga a lokusebenza Tinder-style. Amadoda amathathu nabesifazane abathathu bavumelana ukuba amaphrofayli ezimbili ezahlukene qamba them. Omunye tshengisa them in zibhekise evulekile, ezifana encike emuva imilenze eyeluliweyo, noma nabayishumi izingalo zabo out ububanzi. In the ezinye profile, bamukela zibhekise "contractive", ngokwesibonelo, by hunching up, noma alo esifubeni sabo bewela imilenze yabo.
Vacharkulksemsuk alayishiwe amaphrofayli ngezimpelasonto ezimbili futhi baloba ezaziwakhile isithakazelo kakhulu romantic. Njengoba ababikezela, the postures avuleke kakhudlwana ukuba uchume kanjani abahamba phambili ngokuya ngezinqubomgomo izicelo ukuhlangana. Again, kokubili amadoda nabesifazane bazuza, nakuba umphumela lalilikhulu for amadoda.
Ukubhala ephephabhukwini, abacwaningi shayela le splaying izingalo nemilenze online ukuphola izithombe "evelele kunazo zonke, ukuvula ekhombisa non-ngamazwi at zero amaziyo. "
"Ngokusekelwe imiphumela yethu yathola kusukela ezinkulungwaneni zabantu abangashadile at an langempela ngesivinini dating umcimbi, futhi usebenzisa isicelo ukuphola, kusobala ukuthi wokunwebisa postural kungayandisa kakhulu amathuba komuntu owenza yimpumelelo initial uxhumano romantic,"Banezela.
Vacharkulksemsuk usola ukuthi ukubusa kanye nokuvuleleka wenze abantu bahle ngokwengeziwe ngoba abantu okudlangile kulo bavame ukwenza izinqumo ezibenza kangcono emsebenzini abantu evulekile bazimisele kakhudlwana ukuzamukela nabanye lokho abanakho ekuphileni.
Studies in nezinye izilwane basikisela abantu kungenzeka kungabi zihlukene kangaka. Vacharkulksemsuk okukhulunyiwe ekhombisa lapho izilwane wamzalela behinds zabo nesitho sangasese. gorilla Male ibukise physicality zabo by ukukhahlela futhi egijima emaceleni, kuyilapho lamaphigaga ukuheha peahens ngokubonisa umsila izimpaphe.
Ukuhlangana umuntu ohlotsheni oluthile lokuzijabulisa ukuphola online isibe lesibili indlela ezivame kakhulu lokuthola umlingani, ngemva kokuhlangana ebanganini. Cishe eminyakeni abantu 91m ukusebenzisa Smartphones ukuthola abalingani, mayelana 70% ngobani nibadala 16 ukuze 34, abalobi bhala.
"On ezisekelweni ezifana, lapho ithola a date nomunye umuntu evame iqala isithombe noma ukuxhumana ezimfushane, kuba kunenzuzo ukwazi nokukhulisa komuntu amathuba kungakapheli incishisiwe nesikhathi esishiwo enjalo,"Banezela.
Samsung Alindele Record Inzuzo njengoba Competition Heat ...
I kuyizinhlayiyana namafutha phezu okusanhlamvu elayisi
21497	4 Isigaba, Ukuqomisana, Ian Sample, kwesigaba Main, Online ukuphola, Psychology, Relationships, Isayensi, The Guardian, Tinder, UK news
← Virtual Reality Porn liyeza Dyson Iqala Pure Cool Link Air purifier →